Shukaansi | June 2022
Waa tuma Alina Kabaeva, gabadha saaxiibka ah ee Vladimir Putin, iyo xaggee hadda ku taal?
Warar ay heleyso Voa News ayaa sheegaya in Kabaeva la arkayay iyadoo xiratay faraantiga arooska. Iyada iyo ninkeeda waxay leeyihiin mataano 7 jir ah
Waa ayo Brooklinn Khoury, gabadha saaxiibka ah ee Chloe Lukasiak?
Chloé Lukasiak, oo ah jilaayada qoob ka ciyaarka Moms, ayaa dabka ku sii shiday wararka xanta ah ee sheegaya in ay shukaansato raadiyaha Brooklinn Khoury. Chloé, 20, iyo Brooklinn, 19
Jennifer Mcdaniel, Furritaankooda, iyo Guurka Koowaad ee Hulk Hogan
Jennifer McDaniel, oo ah xaaska labaad ee Hulk Hogan, ayaa ka codsatay furriin isaga, sida ay sheegtay WWE. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyada iyo kii hore
Waa ayo saaxiibka Laverne Cox, oo maxay tahay magaciisa?
Xirfadda Laverne Cox ee qaybta madadaalada waxay bilaabatay waqti dheer ka hor guusha Netflix's Orange Is the New Black series.
Wax badan ka baro Courteney Cox lammaanaha wakhtiga dheer
Courteney Cox waxay abaal ku leedahay saaxiibkeed Ed Sheeran xiriirka muddada dheer ee iyada iyo saaxiibkeed Johnny McDaid.
Waa kuma 'Anna's' Chase Sikorski ka abuuraya nolosha dhabta ah? Ma Tech Bro?
Anna Delvey (magaca dhabta ah: Anna Sorokin) waxay samaysay cinwaannada 2018 markii maqaalka Vanity Fair uu qeexay sida ay u khiyaanaysay taajirnimada.
Waa kuma Maude Apatow? Waa ayo iyada?
Sida ay wararku sheegayaan, jilayaasha soo bandhigay xiisaha jacaylka ee riwaayadda HBO ayaa la arkayay iyagoo cunto 'qarsoon' ah la wadaagaya asxaab ku sugan New York.
Jacaylku Waa Indho La'aan Xiddigaha Indho La'aanta Eedeymaha Natalie Lee Taariikhaha La-Xiddigta Sal Perez waa la beenoobay
Cusboonaysiinta maanta ee jilayaasha Love Is Blind waxaa ka mid ah caddaynta sirta ku xeeran xaaladdii show-ga dambe ee Sal iyo Natalie.
Maxaa ku dhacay Nick iyo Danielle ka dib jacaylku waa indhoole?
Tartamayaasha Nick Thompson iyo Danielle Ruhl waxay u istaageen xiriirkooda hoose iyo xiriirkooda macaan intii lagu jiray qeybta koowaad
Tom Cruise Girlfriend: Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato!
Tom CRUISE iyo saaxiibtiis Mission Impossible ee saaxiibtiis, Hayley Atwell, ayaa kala tagay, ayaa la sheegay.
Shukaansiga Katie Holmes: Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato!
Aktarada Katie Holmes ayaa hadda ku tiirsan in ay doob noqoto ka dib markii ay jacayl kooban la yeelatay magaalada New York
Gabadha Jamie Foxx: Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato!
Jamie Foxx wuxuu arkay isagoo gacmaha ku haya haweeney qarsoodi ah iyadoo saaxiibtii hore Katie Holmes ay u soo baxday inay tahay islaan kaligeed ah ka dib kala tag.
Saaxiibka Selma Blair: Waxa laga yaabaa inaad wax walba garanayso!
Selma Blair waxay heshay amar xannibaad ah oo ka dhan ah saaxiibkii hore ee Ron Carlson ka dib markii loo xiray rabshado qoys oo culus.
Xaaska Joshua Jackson: Wax kasta oo aad ogaan karto!
Jackson wuxuu xiriir la bilaabay atariishada Jodie Turner-Smith sanadkii 2018. Waxay guursadeen Disembar 2019 waxayna dhaleen gabadh, dhashay Abriil 2020
Seyga Jennifer Garner: Waxaa laga yaabaa inaad wax walba garanayso!
Jennifer Garner iyo John Miller ayaa markii ugu horreysay lala xiriiriyay Oktoobar 2018 ka dib markii ay soo gabagabeysay furiinkeeda Ben Affleck
Waa ayo Danica Patrick Shukaansi? Goorma Iyo Siday Ula kulantay Qofkaas Gaarka ah?
Habayntu waxay ahayd guul! Danica Patrick iyo saaxiibkeed cusub Carter Comstock waxay wada socdeen dhawr bilood oo keliya, laakiin lammaanaha ayaa durba ku raaxaysanaya.
Taariikhda Shukaansiga Tommy Lee 2022 | Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Yaa u shukaansaday Tommy Lee? Tommy Lee, sida dadka caanka ah ee kale, waxa uu door bidaa in uu ilaaliyo noloshiisa gaarka ah iyo jacaylkiisa sirta ah, markaa marar badan dib u hubi marka aynu ku soo kordhinno wax cusub
Mikaela Shiffrin saaxiibkiis, Aleksander Kilde: Wax walba oo aan ognahay!
Mikaela Shiffrin waxaa laga yaabaa inaysan ku guuleysan billaddeedii seddexaad ee dahabka Olombikada sanadkan, laakiin wali waa xoog in lagu tiriyo inay tahay horyaal laba jeer ah oo Olombikada ah (iyo
Taariikhda Siideynta She Hulk: Tani miyay cusboonaysiinaysaa kuwa sameeyayaasha sanadkan!
Wax cusub ayaa magaalada ka jira! She-Hulk waxa la siiyay iftiinka cagaaran Marvel, marka Bruce Banner waxa ay yeelan doontaa shirkad qayb ka mid ah waaxda cagaaran.
Nic Kerdiles, saaxiibkii Savannah Chrisley, wuxuu nadiifiyaa sirtii wasakhda ahayd!
Nic Kerdiles, Savannah Chrisley's mar-labaad, saaxiibkiis-ka-baxsan, ayaa helaya xoogaa caawimaad ah sirtiisii ​​wasakhda ahayd ee ugu dambeysay. Sii wad akhriska si aad wax walba u barato
bogagga internetka ee filimka ugu fiican oo lacag la'aan ah
koodhka xayeysiiska ee pokemon go
magaca kooxda qoyska ee whatsapp
ma u baahan tahay inaad bixiso crunchyroll
daawo online filimada cusub oo buuxa oo lacag la'aan ah